थारू समुदायमा माैलिक शैली : ‘कल्वा खुवाई’ गर्दै धान रोपाइँको चटारो (फोटोफिचर) « News24 : Premium News Channel
थारू समुदायमा माैलिक शैली : ‘कल्वा खुवाई’ गर्दै धान रोपाइँको चटारो (फोटोफिचर)
नेपालगन्ज, ६ असार । पश्चिम तराई क्षेत्रका अधिकांश ठाउँमा धान रोपाइँको चटारो सुरू भएकाे छ । असार लागेपछि बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली, कन्चनपुर र कपिलवस्तु लगायतका अधिकांश ठाउँमा धान रोपाइँको चटारो लागेको हो ।
थारु समुदायमा धान रोपाइँको सुरुवाती चरणमा अरु समुदायभन्दा फरक शैली रहेको छ । हरेक थारुबस्ती समुदायमा धान रोपाइँ हुनुभन्दा पहिलो दिन उनीहरुले गाउँभरिका समुदाय मिलेर सुँगुर अर्थात् (जिता) मार्ने र अन्य मीठा मीठा परिकार जस्तैः माछामासु, सागपात, अन्न, घोँघी, सिध्रा बनाई खेतमै गएर पूजा अर्थात (कल्वा खुवाई) गरेपछि मात्र खेत रोपाइँ सुरु गर्ने चलन रहेको छ ।
कल्वा खुवाइको दिन गाउँभरीका बासिन्दा आ-आफ्नो घरबाट बनाएको परिकार खेतमै लगेर खाने गर्दछन् । खेतको पूजा गरी मीठा मीठा परिकार खेतमै खाने र अलिकति खेतको भाग पनि छोड्ने गर्दछन् । प्रविधिसँगै थारु समुदायमा खेती गर्ने शैली परिवर्तन भए पनि खेतको उद्घाटन अर्थात् कल्वा खुवाई भने परिवर्तन भएको छैन बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नं. ३ का अगुवा लहानु थारु बताउनुहुन्छ ।
पुर्खौं-पुस्तादेखि चल्दै आएको पराम्परालाई अँगाल्दै आइरहेका थारु समुदायमा शुक्रबार कल्वा खुवाई धुमधामका साथ मनाएका छन् । खेतमा खाना खानका लागी अर्थात कल्वा खुवाईका दिन पुरुषहरु खेतमा बिहानै खेत जोत्न जाने र महिलाहरुले मीठा परिकारसहितको खाना लिएर खेतमा जाने अनि खाना खानभन्दा पहिला मेघा बाबा अर्थात् मेघनाथ (बादल)लाई पहिला पूजा गरेर खान दिएपछि अरुले खाने चलन रहेको बर्दिया बढैयाताल गाँउपालिका वडा नं. ५ का किसान गोर्वधन थारुले बताउनुहुन्छ ।
आफन्तजनलाई बोलाउने र घरबाट पकाएर खेतमा लगेका मीठा परिकार खान दिने चलन रहेको छ, जसले गर्दा आफन्तको माया र भाईचारा बढ्ने पनि जनविश्वास गरिन्छ । यसले धान उत्पादन र बर्खा राम्रो हुने गरेको बढैयाताल गाँउपालिका वडा नं. ५ कि स्थानीय लख्खी थारुले बताउनुहुन्छ ।
पछिल्लो समयमा थारु समुदायमा उन्नत जातका धान लगाउने र धेरै उत्पादन गर्नेतिर किसानहरु आकर्षित हुन थालेका छन् । तराई क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि र उन्नत जातका धान लगाए पनि रहनसहन र आफ्नो पुरानै संस्कृतिलाई बचाउँदै आइरहेका छन् ।
पुस्तौँदेखि चल्दै आएको चलन र धानको उत्पादनमा समेत राम्रो हुने भएकोले कल्वा खुवाई अर्थात् खेतमा खाना खाने यो पराम्परालाई थारु समुदायले अपनाउँदै आएका छन् । थारु समुदायका मानिसहरुले अझै पनि पुस्तौँदेखि चलिआएको रीतिरिवाजलाई मान्यता दिँदै आएका छन् । यसपछि थारु समुदायमा खेत सकेको दिन पनि हरधवा अर्थात् खुसियाली खाने चलन रहेको छ ।